Horjoogaha koxda Al-shabaab oo soo duubay muuqaal Calaacal & Cataaw ah – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Horjoogaha koxda Al-shabaab oo soo duubay muuqaal Calaacal & Cataaw ah
By Ali Abdulkadir Ali / November 9, 2019 November 9, 2019
Shan sano kadib markii uu xilka qabtay horjoogaha kooxda Al-Shabaab ee argagaxisada ah, ayuu markii ugu horraysay soo duubay muuqaal dheer oo soconaya muddo dhan 52 daqiiqo.
Marka loo eego si guud dulucda muuqaalkaan, wuxuu isugu jiraa sheegasho been ah, Calaacal iyo marin habaabin qaawan oo caada u ah horjoogaha kooxdaan.
Muuqaalka oo la mal-dahay isla markaana la hoosaasiyay qaybo badan oo ka mid ah, ayaa waxaa laga dheehan karaa duruufaha guud ee ku xeeran horjoogaha kooxda, welwelka lasoo darsay kooxda, iyo mustaqbalka kooxda argagaxisada ah ee Al-Shabaab.
Muxuu uu usoo muuqtay Horjoogaha Kooxdu Xilligaan?
Ugub ma ahan in horjoogaha kooxda oo 5 sano jirsaday oow soo diro farriimo marin habaabin ah, balse waxaa hadda cusub ah in uu ka fursan waayay inuu soo muuqdo laftiisu, taasoo mamnuuc ka ah horjoogayaasha kooxaha aragagxisada dunida oo dhan, hadii aysan jirin duruufo adag oo lama dhaafaan ah.
Xeel-dheerayaal daawaday muuqaalkaan ayaa ku sababeeyay soo muuqashada horjoogaha kooxda arrimaha soosocda:-
Wuxuu muddo la tacaalayay cudur dilaa ah, welina wuu xanuun sanyahay, wxuuna isku dayayay muujinta in uu nool yahay. Waxaa caddayn u ah in uu ladaala dhacayo cudur dilaa ah saacadda uu xirnaay oo ah mid loo xirto arrimo caafimaad iyadoo sheegayso dhaqdhaqaaqa xibnaha muhiimka ah ee jirka qofka.
Horjoogaha kooxda waxaa culays xoog leh kasoo food saaray kala qayb sanaanta xooggan ee ka jirta kooxada dhaxdeeda, taasoo ku qasabtay in uu soomuuqdo si uu isagu dayo in uu damiyo xasaradah ka dhax aloolsan kooxda Al-Shabaab.
Kooxda Al-Shabaab waxaa culays adag ka soo wajahay duqay maha cirka ah iyo weerarada dhulka ah, waxayna wajahaysaa xaalad amni oo aad u adag. Arrintaan ayaa keentay in Horjoogaha kooxda Al-Shabaab ku cataabo Shacabka Maraykanka.
Calaacalka Horjoogaha kooxda Al-Shabaab
Muuqaalka uu soo diray horjoogaha kooxda Al-Shabaab, waxaa badankiisu ka dhignaay walwal iyo walbahaar ka dhashay duruufaha amni ee ku xeeran kooxdaan. Hadalka Horjoogaha kuma jirin ama kuma badnayn Gabay, Qiiro iyo Digasho sida horay looga bartay, taasoo ka dhigan in muuqaalka uu soo diray uu yahay calaacal iyo calool jileecsi.
Horjooguhu, wuxuu ku calaacalay shacabka maraykanka, isagoo illaabay in ururka uu ka tirsan yahay ee Al-Qaacidda uu yahay midkii gaysatay weerakii 11/9 ee lagu dilay kumanaan ah muwaadiniinta Maraykanka.
Sidoo kale, horjooguhu kuma hadaaqin hadalladii caadada u eheed sida; Murtad, Gaala raac, Daru kufri iyo wixii la mid ah, taasoo muujinayso in uu shacabka Soomaaliyeed calool jilacsanayo xilligaan.
Mustaqbalka Kooxda Al-Shabaab
Muuqaalka Horjoogaha Kooxda Al-Shabaab, wuxuu kusoo aaday maalmo kadib markii lagu dilay dalka Siirya horjoogihii kooxda argagaxida ee Daacish Abuukar Al-Baqadaadi, taasoo walwal wayn ku abuurtay Ahmed Diiriye (geeridii galbeed laga sheego gonad haaga ka filo).
Ma ahan arrin si caadi ah u dhacdo in horjeege kooxaha argagaxisada uu iskiis usoo muuqdo iyadoon laga fursan wayn. Ahmed Diiriye (Horjoogaha kooxda Al-Shabaab) ayaa markaan ku jiri waayay godkii oow ku dhuuman jiray culayso badan oo soo wajahay oowgood.
Culaysyada kooxda Al-Shabaab Xilligaan haysta, waxaa ka mid ah duqaymo ay ku hoobanayaan Horjoogayaashooda iyo ciidamdooda, soogooshasada Horjoogayaashooda iyo Afenterigooda, isqab qabsi iyo aragti kala duwanaasho ka aloolsan dhaxdooda, sii idlaashada Horjoogayaashii aasaasay kooxda iyo duugowga aragtidii gurracneed ee kooxdu ku albaabtay.
Intaas waxaa dheer, in xilligaan aysan kusoo biiraynin Al-Shabaab Ajaanib dagaal doon ah, iyo in ay gaartay kooxdu da,da ay ku bur-buraan ururada hubaysan dunida oo dhan.
Sababahaan kor ku xusan oowgood iyo kuwa kale oo keenay in horjoogaha kooxdu isqari waayay, waxay markaati madoonta ka dhigayaan in maalmaha Al-Shabaab u haray ay yihiin fara ku tiris,ayna kooxdu xilligaan tahay naf la goowracay oo rafanayo.